WAA MAXAY SABABTA CAGAHA LOO QALLAJIYEY: MAXAY TAHAY SABABTA CALEENTA CALEENTA AH, WAXA LA SAMEEYO, SABABTA CALEEMAHA MADOW, IYO TALLAABOOYINKA AY QAADAAN HADDII AYSAN WAX CAAWINAYN? - SOOSAARKA DALAGGA
Talooyinka bannaanka u ah: sababta marigolds qalalan iyo waxa laga sameeyo waxa ku saabsan?
Marigolds - mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan xagaaga ee qurxinta sariiraha ubaxa, meelaha iyo xitaa sariiraha khudradda. Nasiib wacan, dhalaalaya iyo gumeysi, marigolds waxay abuuraan niyadda cajiib ah markaad eegto iyaga.
Sababta loo qeybiyo ballaaran ee marigolds waxaa sabab u ah aan qabin, daryeel la'aan dhib la'aan, ubax dheer iyo dhalaalaya.
Cudurada marigolds waxay yeelan karaan sababo kala duwan. Maqaalka ayaa ka hadli doona dhibaatooyinka daryeelka ee ubaxyadaas lagu xalin karo iyo sida loo sameeyo.
Waa maxay ubaxyadan?
Marigolds waa ubax ka tirsan qoyska Astrov (Compositae). Ubax magacan ayaa la helay sababtoo ah tayadooda, kuwaas oo leh dhar qoyan. Guud ahaan waxaa jira ilaa 53 nooc oo marigolds ah.
Muxuu dhirta u eg yahay?
The afkoda toosan, horumaray, taas oo ka dhigaysa baadiyaha leh height ah 20 ilaa 130 sentimitir.
Nidaamka xididku waa mid muhiim ah.
Caleemaha waa pinnatisect, waxay si caadi ah ugu diyaarinayaan asliga ah. Marar dhif ah, waxaa jira marigolds leh caleemo dhan. Midabka ka soo lime ilaa cagaar madow.
Noocyada kala duwan ee marigolds waxay leeyihiin inflorescences kala duwan: laga bilaabo flatten si ballaaran, laga bilaabo jaalaha ah ilaa oranji. Noocyada qaar waxay isku darsamaan dhowr midab oo ku yaala florescence.
Sababtoo ah ubax dheer (ilaa laga bilaabo dhaxan ugu horeysay) marigolds yihiin kuwa ugu cadcad ee bannaanka u. Muhiim ma aha in lagu beero ubaxyada beerta furan, qaar ka mid ah dhirta beerta marigolds ee dheryihii ama dheryihii, iyaga ku deldelay daaqadaha ama iyaga dhigo balastar. Ku saabsan haddii ay suurtogal tahay in ay ku koraan warshad guriga at dheri, halkan ka akhriso.
Cudurada caamka ah iyo dhibaatooyinka sii kordhaya
Xaaladaha intooda badan, marigolds waa unpretentious iyo adkaysi u cudurada, weeraro by cayayaanka. Laakiin marka daciifsan yahay sifooyinka ilaalinta ee caabuqa ayaa dhici kara. Inta badan cayayaanka iyo cudurada soo socda ayaa soo baxaya.
Caarada caarada Halista infekshanka ayaa ku kora ciidda cagaarka ah.
Lugaha iyo fungus. Wuxuu ku muuqdaa carrada qoyan.
Snails iyo slugs. Deegaanka ku haboon waa dhul qoyan. Waxay caleemaha ka baxaan, ka tagaan dirxiga.
Qamadi ciriiri. Cudurku wuxuu ku sii socdaa heerkulka hoose ee carrada qoyan.
Marka lagu daro cudurada iyo cayayaanka ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu yeelan karaa dhibaatooyin tiro badan marka uu korayo marigolds.
Kobaca xawaashka ah sababtoo ah la'aanta qoyaanka ee ciidda.
Duufaannada yaryar ee yaryar iyo kuwa yaryar ayaa sabab u ah la'aanta qoyaanka.
Root-ku-dillaac leh roobab badan.
Jooji kobaca sababtoo ah hoos u dhac fiiqan oo ah heerkulka ilaa +10 digrii, kaas oo la socdo casaanka caleemaha.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in badi ee Bacriminta iyo bacariminta keeni doonaa kororka mass cagaaran, iyo inflorescences noqon doonaa mid yar, oo aan macquul ahayn oo caajis ah. Maxay tahay iyo sida loo quudiyo dhirta ubax badan, waxaanu u sheegnay maqaalkani, iyo waxa ay quruxdoodu u eg yihiin iyo waxa la sameeyo haddii aanay rabin in la barbardhigo si faahfaahsan loogu sharraxay wax kale.
Waxaad ka akhrisan kartaa cudurrada iyo cayayaanka ubaxa halkan, waxaan ku qornay hababka wax looga qabanayo cudurada ugu caansan iyo cayayaanka ku jira qalabkaan.
Waxaa jira dhowr arrimood oo u horseeda inay rabaan.
Iftiin Caleemaha qallalan waxay ku xiran yihiin sida qorraxda qoraxdu u dhacdo geedka. Raajooyinka tooska ah waxay keeni karaan gubasho. Haddii beerta ubaxu ay xaddidan tahay oo ay ka qarinayso qorraxda marka ay sii kordheyso geedo of marigolds, ka dibna ka dib markii laga beerto dhul furan caleemaha qallajin ka baxsan qorraxda.
Biyaha Qalitaanka marigolds waa geedi socod muujin kara in geedka uu helo dareere ka yar. Marigolds for koritaanka baahsan iyo ubax u baahan tahay waraabin maalinle ah. Isla mar ahaantaana, waxaa muhiim ah in laga hortago joojinta qoyaanka, tan iyo markii jawiga noocan ah uu si degdeg ah u muuqdo fungus khatar ah.
Goobta beerista. Marka beerashada ubaxyada, bannaanka u tiro xadidan meel u dhexeysa duurka. Sababtoo ah xaddidan, burooyinkeeda iyo caleemaha geedka waxay bilaabaan inay engegaan oo qallalaan. Marka laga beerto marigolds, muhiim maaha in la qaybiyo ceelasha iyo meel bannaan oo bilaash ah laga bilaabo geedka.
Digniin! Masaafada u dhexaysa duurka waxay ku xiran tahay nooca marigolds. Noocyo dhaadheer, qorshe 40x40 ah (40 cm u dhaxaysa duurka iyo saf) waa ku haboon yahay. Wixii sredneroslyh - waa 30x30, loogu talagalay hoos u - 20x20.
Waxaan samaynaa baadhitaan
Dhibaatada Tilmaanta iyo Calaamadaha
Lugta madow Cudurrada caamka ah. Hannaanka ay qaybta hoose ee stem madow, waxa uu bilaabaa inuu qudhilo.
Root kallana At caleemaha dhirta qaangaar noqdaan huruud ah, burooyinkeeda waxay u jajabaan.
Dhirta aan hormarsanayn.
Burooyinkeeda yaryar iyo kuwa aan qabin ee aan lahayn miraha.
Dhibco yar yar oo caws ah.
Caarada caarada Waxay muuqataa ciidda qallalan, taas oo koraan marigolds. Khatarta caabuqa waxay kordhisaa meelaha bannaan (koriyo, guryaha). Cayayaanka ayaa cuno caleemo. Calaamadaha caabuqa - caleemaha khafiifka ah, dhibco iftiin ah iyo caleemo huruud ah.
Slugs iyo shinbiraha Cuntada cayayaanka - caleemaha, ubaxa, afkoda. On infektiono ayaa sheegay in track tram of daloolka qalajiyey on caleemaha, burburka gaarka ah ee baadiyaha.
Aphid Cayayaanka yaryar ee cunta yar. Calaamadaha caabuqa - godadka yar yar ee cagaaran. Sidoo kale cayayaanku wuxuu daboolayaa saxanka caleenka leh dareeraha dareeraha ah. Gobollada waaweyni waxay gabi ahaanba burburin karaan baadiyaha muddo gaaban.
Rateriyada Calaamad muujinaysa weerar rogaal celis ah - waxay ka baxaysaa dhinacyada iyo bartamaha. Caleemaha caleemaha waxay soo jeedinayaan in dirxiga lagu rido dirxiga.
Maxay qeybo ka mid ah warshad qallajineysaa iyo burooyinkeeda madow?
Haddii ubaxa joojiyo koritaanka, noqday caajis, caleemaha waxay bilaabeen inay qalalaan, iyo asliga ah ama buro madow u jeedo - kuwani waa astaamaha bacterial lesion. Sababta ugu weyn waa waraabinta xad dhaafka ah. Marigolds waxay jecel yihiin biyaha, laakiin ciidda ayaa aad u qoyan si ay uga sii xumaato marka la qalajiyo.
Sidoo kale xanuujinta infekshin leh bacriminta xad-dhaafka ah, clodded clodded ee dhulka.
Dhaawaca bakteeriyada wuxuu ku dhacaa qaabka:
bakteeriyada iyo gubashada bakteeriyada;
Tallaabooyinka guud ee dhibaatooyinka - gargaarka hore ee warshadda. Dhamaan qaybaha la waxyeeleeyay ama si xun u xanuunsan waa in laga saaraa maqas, pruner. Wixii 2-3 maalmood, dhirta waa in lagu tagaa iyada oo aan waraabiyo si ay u qalalaan ciidda. U hubso inaad sameysid jadwal waraabin, si caadi ah u dheelitirka qoyaanka.
Tallaabooyin dheeraad ah waxay ku xiran tahay baaritaanka.
Ogaanshaha cudurka Waxa la sameeyo
Daaweynaya diyaarinta bakteer-ka kooban (vitriol buluug, Bordeaux isku dar, Oxyhom).
Kiimikooyinka Tani waa Trichodermin, Maxim, Vitaros.
Haddii cudurku u muuqday on geedo of marigolds, waa in la burburiyo.
Root kallana Waxay kaa caawinaysaa inaad ku buufiso kiimikada:
Noocyada caanka ah ee halganka - waraabinta ciidda leh xal milix ah, soo jiitay qaybta khatarta ah ee xididka leh cagaha la jajabiyey ama ash.
Infekshanka bakteeriyada Warshad waa la beeray oo la waraabiyey fungicide bakteeriyada:
Oxyh (20 g halkii 10 l);
Alirin-B (2 kiniin ah halkii litir);
Vitaros (2 ml 1 l).
Qalabka beerta waa la nadiifiyaa. Ka-hortagga - buufinta marigolds leh biobactericides (Fitolavin, Fitosporin).
Qaadadaha yar yar, tallaabooyinka xakamaynta farsamada ayaa faa'iido leh (si ay uga soo qaadaan dulin ama gacanta ku dhaqo cadaadiska biyaha).
Cunnooyinka nafaqada: marigolds biyo leh saabuun, xal xalal basasha iyo toon, tubaako. Sidoo kale wuxuu noqon doonaa maraq waxyeelo leh oo caleemo leh oo leh ur xun.
Haddii aysan wax saameyn ah lahayn, kiimikooyinka ayaa kaa caawin doona. Kuwani waa Sumi-Alfa, Inta-Vir, Arrivo, Microcin, Ripcord, Tsitkor iyo kuwo kale.
Waxaad ka takhalusi kartaa slugs adoo kala firdhiya taargooyinka yaryar, gogo 'tufaax ama baradho habeenkii u dhow ubaxa. Aroortii, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu u baahnaan doonaa inuu soo uruuriyo walxahaas iyo cayayaanka ayaa ku dhegay iyaga. Ka hortagga infakshanka - budada mayardh ayaa ku wareegsan marigold ama ash.
Caawimaad! Inta lagu jiro daaweynta marigolds, dhir kasta oo caafimaad qaba waa in lagu daaweeyaa diyaarinta kiimikada, sababtoo ah cayayaanka badan ayaa ukumi kara ukumaha iyo dirxiga.
Haddii aan waxba laga caawinin
Haddii cuntada cuntooyinka iyo alaabooyinka kiimikada aysan saameyn ku yeelan, dhirta ay sii socoto oo ay sii socoto, waxaad tagi kartaa tallaabooyin aad u daran.
Dhibaatadu ma saameyneyso xididka. Marigold gooyay asalka, muddo 12-24 saacadood ah si aad ugu daadiso oo daboosho polyetylen. Xalka noocan oo kale ah waa la talin, haddii ubaxa gubay qorraxda tooska ah, ma helin biyo, cufnaanta cagaaran waxaa la cunay cayayaanka duulaya.
Haddii xididku uu saameeyo kallana, lugta madow sii socota - geedka waa in laga saaraa. Sidoo kale waa lagama maarmaan marka ay weerarto qaar ka mid ah cayayaanka (nematodes). Ubaxa waa in lagu qodaa xididka, laga soo bixiyaa goobta oo gubay. On site ee geedka cudurka qaba inta lagu jiro sanadka aan la beeray dhirta kasta.
Marigolds waa ubaxyo qurux badan oo qurxin doona qeyb ka mid ah ubaxyada. Si dhirta loo qurxiyo indhaha oo aaney waxyeello u laheyn, waxaa muhiim ah in la kormeero xaaladdeeda, ha ka badin ama xad dhaafin. Bacriminta si tartiib ah, oo kaliya marigolds caafimaad leh. Haddii ay jiraan calaamadaha caabuqa, qaado tallaabooyinka degdega ah.